November 2016 - Puntland Mirror Believable Media Website
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo Muqdisho ka bilaabmatay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada lagu soo xulayo xildhibaanada qabiilooyinka Banaadiriga iyo Somaliland umatali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ka bilaabmatay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Doorashada aqalka hoose ayaa ka bilaabmatay […]
Somalia: lower house elections begin in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) The poll to select the members representing Banaadiri clans and Somaliland in the upcoming lower house of the Somali federal parliament have started in the Somali capital, Mogadishu on Wednesday. The Somalia’s regional […]
November 30, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweeynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu gabi ahaanba ka tagi doono ganacsiga si uu diirada u saaro ugana fogaado u arkida dhibaatooyinka gaarka ah. Mr Trump ayaa sheegay […]
Bosaso-(Puntland Mirror) At least two Puntland soldiers were killed and 10 others wounded on Tuesday when a roadside bomb hit their vehicle in Galgala mountains of Bari region, security sources confirmed to Puntland Mirror. The […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa markale dib u dhac kuyimid, sida uu shalay gelinkii dambe sheegay guddoomiyaha doorashada dadban ee Soomaaliya. Guddoomiye Cumar Maxamed Cabdulle sidoo kale loo yaqaan Cumar Dhagey ayaa sheegay in doorashadu […]
November 29, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
London-(Puntland Mirror) Diyaarad ay saarnaayeen 81 qof, oo ay kamidyihiin ciyaartoy naadi kubada cagta oo Brazil ah ayaa ku burburtay dalka Columbia, sida ay wararka sheegayaan. Booliiska Columbia ayaa sheegaya in ka badan 75 qof oo […]
Ohio-(Puntland Mirror) Ninkii geystay weerar ka dhacay Jaamacada gobolka Ohio ayaa la aqoonsaday in uu ahaa Soomaali, kaasoo arday ka ahaa jaamacada, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Cabdirisaaq Cali Cartan oo 18-sanno jir ah ayaa […]
November 28, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Ohio-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay Jaamacada gobolka Ohio kaasoo ay qaadeen labo qof maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka. Warbaahinta maxaliga ah ayaa kusoo waramay […]
Madxweyne ku xigeenka Puntland oo tagay magaalada Boosaaso iyada oo ay Al-Shabaab heysato tuulo ku dhow
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa habeenimadii Axada tagay magaalada Boosaaso. Safarkiisa Boosaaso ayaa ah kii ugu horeeyay tan iyo markii la doortay bishii Janaayo 2019. “Waxaan safarkaygii ugu horeeyay ku [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa maanta oo Arbaco ah ammaanay dadaalada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku fududeynayso isa soo dhiibida xubnaha Al-Shabaab katirsanaan jiray. “Mareykanku wuxuu taageersanyahay hannaanka ay hoggaaminayso Soomaaliya ee ah in sharafta looga [...]